» मास्क लगाएर दौडनु र ब्यायाम गर्नु कत्तिको खतरनाक छ ?
मास्क लगाएर दौडनु र ब्यायाम गर्नु कत्तिको खतरनाक छ ?
१. के यस समयपार्कमा घुम्न जानु उपयुक्त होला ?
मास्क लगाएर दौडदा स्वास्थ्यकालागि खतरनाक साबित हुन्छ। मास्क लगाउँदा श्वासमा अक्सिजनको मात्रामा कमि आउन सक्छ जो खतरानाक हुन्छ । चीनमा २६ वर्षीय एक ब्यक्तिमा स्कलगाएर दौडिएकै कारण अस्पताल भर्ना हुनु परेको थियो ।
मास्क लगाएर शारीरिक ब्यायाम गर्नु हानिकारक साबित हुनसक्छ । मास्कले श्वास फेर्नमा बाधा पुर्‍याउने र ब्यायाम गर्दा पर्याप्त अक्सिजन आवश्यक हुने भएकाले यो उपाय गलत साबित हुन्छ । तसर्थ यस समयमा घरको खुल्ला क्षेत्र जहाँ पुर्ण सुरक्षित छ त्यस स्थानमा बिनामा ब्यायाम गर्दा हुन्छ ।